IMT Vislink သည်အမေရိကန်လေတပ်အသုံးပြုရန်လေကြောင်းချီဗွီဒီယို Downlink၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းစနစ်များကိုဒေါ်လာ ၉၀၀,၀၀၀ တန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း | NAB သတင်းများ | 900,000 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IMT Vislink ထောက်ပံ့ရေးဝေဟင်ဗီဒီယို downlink, transmit လုပ်ဖို့ $ 900,000 စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်အမေရိကန်လေတပ်အသုံးပြုရန်စနစ်များလက်ခံ
IMT Vislink ထောက်ပံ့ရေးဝေဟင်ဗီဒီယို downlink, transmit လုပ်ဖို့ $ 900,000 စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်အမေရိကန်လေတပ်အသုံးပြုရန်စနစ်များလက်ခံ
Sarasota, FL, ဇန်နဝါရီ 7, 2019 - xG နည်းပညာ, Inc ( "xG" ဒါမှမဟုတ် "ကုမ္ပဏီ") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), အဘယ်သူ၏ IMT Vislink ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယနေ့က၎င်း၏ IMT Vislink စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ဖို့ $ 900,000 အလို့ငှာချီးမြှင့်ခဲ့တာကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည် လေကြောင်းချီဗီဒီယိုကို downlink ဖြေရှင်းချက် (AVDS) အမေရိကန်လေတပ်အသုံးပြုရန်။ အဆိုပါစာချုပ်ထုတ်လွှင့်များ၏ထောက်ပံ့ရေးဘို့ခေါ်ဝေဟင်ပိုင်ဆိုင်မှု, ဆက်စပ် component တစ်ခုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကခေါ်ဆောင်သွား Real-time ကိုဗီဒီယိုပုံရိပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြရန်ဒီဇိုင်းစနစ်များ, မြေပြင်အခြေစိုက်ယူနစ်လက်ခံရရှိသည်။
ဒါကနောက်ဆက်တွဲအပေါ်အမိန့်ယခင်ကတဦးတည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ မေလ 23, 2018 နှင့်ဖွစျကွောငျး IMT Vislink အမေရိကန်ကြည်းတပ်အနေဖြင့်လက်ခံရရှိထားတဲ့အမိန့်နဲ့ဆင်တူအပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ နိုဝင်ဘာလ 20, 2017 ပေါ်မှာ။
"IMT Vislink လျှင်မြန်စွာကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော, high-performance ကိုကမရှိစေရန်, Deployable ဗီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်ဖြစ်နေဆဲ," ဆရာယောဟနျ Payne, IMT Vislink ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် COO ကဆိုသည်။ "တင်းကြပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများ applications များနှင့်ဖြန့်ကျက်ကးထောကျပံ့ပေးနိုငျသောဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်, စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်, မစ်ရှင်-အရေးပါသည်ဗီဒီယိုနည်းပညာကို၌အကြှနျုပျတို့၏ဦးဆောင်မှုအလေးပေး။ "
xG နည်းပညာ, Inc./IMT/Vislink အကြောင်း
xG နည်းပညာရဲ့ IMT နဲ့ Vislink အမှတ်တံဆိပ်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်အထုတ်လွှင့် / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဆင့်-1 ဖောက်သည်ပေးသွင်းယုံကြည်စိတ်ချကြသည်နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး public / ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, တိုးချဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပ္ပံနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်များတည်ဆောက်, စွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားမှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ယင်းအသံလွှင့်, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများ, IMT နဲ့ Vislink အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ဗီဒီယိုဖိုင်, ဖမ်းယူထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် high-definition ဆက်သွယ်ရေးလင့်များသည်။ အဆိုပါဥပဒေ, အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှု & ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်မှာတော့ IMT နဲ့ Vislink လုံခြုံသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှမစ်ရှင်-ဝေဖန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.imt-solutions.com နှင့် www.vislink.com.
Sarasota, Florida တွင်အခြေခံပြီး xG နည်းပညာ 80 ကျော်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆိုင်းငံ့မူပိုင် applications များရှိပါတယ်။ xG မှာ NASDAQ Capital ကိုစျေးကွက် (XGTI သင်္ကေတ) တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်လူသိရှင်ကြားကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အင်ဖို: www.xgtechnology.com.
DPA 4097 Core Micro Shotgun သည် Plant Mic တစ်ခုအနေဖြင့်နောက်ထပ်အခန်းကဏ္Findကိုရှာဖွေသည် - သြဂုတ်လ 10, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IMT Vislink ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-07
ယခင်: GatesAir နှစ်ဦးအကြီးစား FM ရေဒီယိုအပေးအယူများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက် Market က-စီးဂီယာဝေမျှမယ်များတိုးချဲ့ခြင်း
နောက်တစ်ခု: ES အသံလွှင့်ကို Creative နည်းပညာရဲ့အိတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်များအတွက် TSL ထုတ်ကုန်များ '' TallyMan ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ဖြန့်ချထား